Cydia Substrate waa la cusbooneysiiyay si loo saxo cilladaha | Wararka IPhone
Cydia Substrate waa la cusbooneysiiyay si loo saxo cilladaha
Caanka caanka ah ee "hacker" oo aad ugu dhow Jailbreak, "Saurik", ayaa casriyeeyay Cydia Substrate u sii deyneysa illaa noockeeda 0.9.6200. Cusbooneysiintan ugu dambeysay waxaa lagu soo rogay waxqabadyo wax ku ool ah iyo cilladaha cilladaha, sidaa darteed ha fileynin wax isbeddel ah oo heer guud ah, waxay si fudud u hubineysaa in Jailbreak uu waxyar ka xasilloon yahay, gaar ahaan tixgelinta shaqooyinkan nus dhammaadka ah ee saaxiibada 25PP iyo Pangu waxay go'aansadeen inay si rasmi ah u bilaabaan, waxna kama qabtaan laakiin waxay dhibaato u keenaan dadka isticmaala Jailbreak. Waxa kale oo ay si gaar ah u xallisaa dhibaato si cadaalad ah ugu soo noqnoqota aaladaha hadda jira.
Waan iska ilaabi karnaa fariinta qaladka ah "Waa lagu guuldareystay buffer_write (fd) (8, ret = 1)" markii aan isku dayeynay inaan ku rakibno khafiifinta qaarkood kaydinta. Marka, hadda waxaan ku rakibi karnaa tiro badan oo isbeddel ah aaladahayaga, taasi waa, waa inaan rajeynaa in la cusboonaysiiyay oo laga dhigay mid la jaanqaadaya samirka u dhigma. Waa inaan xusuusnaano in noocyadan ugu dambeeyay ee Shiinaha ee Jailbreak ay sababayaan dhibaatooyin aad u yar oo iswaafajin ah oo ku saabsan isbeddelada qaarkood sababo la xiriira ka tagistii horumariyeyaal badan, iyo muuqaalka Jailbreak wuu sii yaraanayaa wuuna sii yaraanayaa sababo la xiriira isku dhafka u dhexeeya macaamiisha iyo dadka talooyinka soosaarayaasha Shiinaha ee barnaamijyadan.
Dhanka kale, horeyba waad u ogayd inaan soo saari doonno liisaska isku dheelitirnaanta iyo casharrada la xiriira. Waxaan fursaddan uga faa'iideysaneynaa inaan xusuusano in ficil ahaan aysan macquul ahayn in Jailbreak loo maro Safari, habka noo saamaxaya inaan keydinno isku xirnaanta adeegga PC / Windows. Si looga fogaado farsamadan, Apple waxay dib ula noqonaysaa shahaadooyinka shirkadda ee looga baahan yahay rakibidda sharciga ah ee codsiyada cid saddexaad. Ma naqaano inta ay tani socon doonto, laakiin waxaan xusuusan nahay in ugu badnaan ay Apple bilaabi doonto macruufka 10 bartamaha bisha Sebtember, waxaanna macsalaameyn doonnaa Jailbreak markale JAILBREAK ama macruufka 10? Goor dhow ayaad go’aan ka gaari doontaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Jailbreak » Cydia Substrate waa la cusbooneysiiyay si loo saxo cilladaha
Hagaag, tan iyo markii aan cusbooneysiiyay substrate, wax badan ayey sudhan tahay. Tan iyo markii aan Jeelka sameeyey waxaay ahayd mid hagaagsan, waana la cusboonaysiinaayey oo psss.
Wuxuu ubaahan yahay cusbooneysiin kale!
Ku jawaab erplansha
Noolow JAILBILA !! Hoos kadhagayso wararka soo kordha !!
Qarsoodiga Brighstone: Hoteelka Paranormal Waa Bilaash Waqti Xaddidan
Pangu Jailbreak Utility Hada wuxuu ku shaqeeyaa iPad Pro